Ngaba iZithuba zeNdwendwe azilunganga kwi-SEO?
NgoLwesithathu, Agasti 27, 2014 NgoLwesine, Agasti 28, 2014 Douglas Karr
Njengoko ujonge ukukhulisa umxholo wendawo yakho, kuhlala kulucelomngeni ukugcina umnqweno womxholo omkhulu. Unokuhendwa ukuba wamkele iibhlog zebhlogi amaxesha ngamaxesha zebhlog yakho.
Yonke imihla sifumana izibonelelo zokuhlawula izithuba ezixhasiweyo kunye nezicelo zezithuba zeendwendwe. Sivavanye iiposti ezihlawulelweyo iinyanga ezininzi ezidlulileyo kwaye sayeka kwangoko- ndingothuka ukuba sinako okuseleyo esidlangalaleni. Umgangatho wawusoloko usoyikeka, umxholo wawungaze ugxile kubaphulaphuli bethu, kwaye injongo yayihlala ikukuthengisa kwaye ingaze ibonelele ngexabiso kubafundi bethu. Izithuba zeendwendwe zisavumelekile kodwa kuya kufuneka ndiqikelele ukuba kuphela yipesenti okanye ezimbini ezishicilelweyo.
Ekuqaleni kwalo nyaka, uMat Cutts kaGoogle unikezele ngesi silumkiso silandelayo:
Kulungile, ndiyayibiza: ukuba usebenzisa ukubhloga kweendwendwe njengendlela yokufumana amakhonkco kwi-2014, kuya kufuneka uyeke. Ngoba? Kungenxa yokuba ekuhambeni kwexesha kuye kwaba sisiqhelo sogaxekile, kwaye ukuba wenza iibhlogi ezininzi zeendwendwe emva koko ujinga nenkampani embi kakhulu. Emuva ngemini, ukubhloga kweendwendwe kwakuqhele ukuba yinto ehloniphekileyo, njengokufumana umbhali onqwenelekayo, ohloniphekileyo ukubhala intshayelelo yencwadi yakho. Ayisiyondlela injalo kwakhona.
Ke… ukubhloga kweendwendwe ayonakalisi nje umxholo womxholo wakho, kunokuba nefuthe kubume bendawo yakho kwiinjini zokukhangela!
Ngokuhlwanje, ndifumene uxwebhu lweLizwi olunenqaku elikhethekileyo elibhalelwe ukuqwalaselwa ibhlog yethu. Ndandinomdla kuba andifumani sithuba de kube nengxoxo ethile kunye nobuchwephesha bobudlelwane boluntu okanye inkampani esibhala ngayo. Ndiyifundile iposti kwaye ibilungile kakhulu-ibonelela ngemizekelo yemikhankaso ye-imeyile eyahlukileyo. Njengotsheki, ndikope umhlathi wokuvula ndawuncamathisela kuGoogle ukubona ukuba ngaba umxholo ubuposwe kwenye indawo.
Oku kukhokelele kwinto eyoyikisayo. Inqaku lahlukile, kodwa ngokusisiseko inqaku elibhalwe kwiminyaka embalwa edlulileyo efumene ingqalelo enkulu. Ndineempendulo ezifanayo kunye neesampuli ezihlaziyiweyo. Yayingeyiyo ikopi efanayo kwaye isenokuba yadlula ngesixhobo esifana neCopyscape… kodwa yayingahlukanga. Nokuba ungubani na umbhali, wayenze umsebenzi olungileyo kakhulu ekuhlaziyeni imizekelo kunye nokubhala kwakhona inqaku ngokwaneleyo ukunqanda ukufunyanwa.
Asizukushicilela inqaku, kunjalo. Ngaphandle kwe-infographics, zonke iiposti esabelana ngazo zahlukile Martech Zone. Kwaye ii-infographics ziyapapashwa ngesingeniso esahlukileyo kunye neesenti zam ezi-2 kuzo. Bantu… musani ukuhendelwa ekwamkeleni iiposti zebhlogi. Ezona zikimu zinokwenzeka kukuba zifumane amakhonkco abekwe kwindawo yakho. Oku kubeka wonke umsebenzi onzima owenzileyo emngciphekweni omkhulu. Musa ukulingwa!
Ndingathanda ukutsiba usuku lokuposa kunokubeka indawo kunye neminyaka elishumi yomgudu kuyo emngciphekweni!
tags: Google +izithuba zeendwendweukusikwa kwematenjini yokukhangela nounSEOizithuba ezixhaswayo
Agasti 28, 2014 kwi-2: 38 AM
Iintsomi yile uyithethayo ndiyathemba. Ayisiyiyo into yokuba izithuba zeendwendwe zifile endaweni yokuba izinto ezingahambelaniyo kunye nezimbi zonxibelelwano zifile ndiyakholelwa !!
Agasti 28, 2014 kwi-11: 09 AM
Iposi enkulu uDouglas! Ndivumelana nayo yonke into oyithethileyo kwaye kufuneka uthi ilungile usavumela iposti yeendwendwe (ezona zilungileyo, kunjalo). Ndifumene iisayithi ezininzi ezigqibe kwelokuba zingamkeli ukuthumela iindwendwe okulungile, kodwa mhlawumbi baya kuliphosa ithuba elihle.